Isu Lokuthengisa Elisuselwa ku-Akhawunti Ikusasa, kanti iGroove ilapha ngalo | Martech Zone
Uma kukhulunywa ngokuthengiswa kwesoftware ye-SaaS, ukukhomba abantu akuyona neze imodeli yokusebenza kahle. Phela, isilinganiso sabantu abangu-5.4 babandakanyeka esinqumweni esisodwa sokuthengisa sebhizinisi. Njengoba kunikezwe ukuthi ukuhlolwa kweqembu kuyinto ejwayelekile, ukuthengisa okususelwa ku-akhawunti (ABS) ikhiqiza kakhulu kunokukhomba izinkomba ezithile.
Indlela esekwe ku-akhawunti yokuthengisa, noma kunjalo, ingadla isikhathi. Ukulandela ngomkhondo ukujula kwamamethrikhi nezikhathi ezibekiwe kokuqondiwe okuningi, kanye nokusebenzisana kulolo lwazi kumathimba angaphakathi, kuzwakala kungenzeki ngaphandle kokuthi ukwazi ukuba nenhlangano efana nekhompyutha. Liyini ikhambi? Ukuzenzekelayo kokuthengisa.
Phakathi nezinsuku zami ngisebenza ekuthengiseni kwaGoogle, ngazithola sengifuna umsizi okhaliphile ozolandela wonke ama-timeline, amaphethini nezikhumbuzi zami ngaphandle kokuthi ngikuthume. Ekugcineni, bengidinga okuthile okuzongisiza ngithole umsele wami ukuze ngihlale ngimatasa ngisebenza isici somuntu sokuthengisa. Kungaleso sikhathi lapho kuzalwa khona iGroove, ipulatifomu yokuvumela abathengisayo.
Ekwenzeni inqubo yokuthengisa ibe lula futhi ihlakaniphe, iGroove idiliza amandla ayo abe yizindawo ezintathu. Ngokuzenzakalela umsebenzi wobufundisi ongenangqondo kuzo zonke izinyathelo ohambweni, i-Groove futhi ithwebula imininingwane ebalulekile ukukusiza uthengise ukuhlakanipha ngokuzayo, ikakhulukazi kulabo abalandela amasu e-ABS.
Vumelanisa: Qonda konke okwenzekayo ku-ecosystem yakho yokuthengisa
Umjikelezo wokuthengisa mude nge-ABS, futhi lokho kusho ukuthi amamethrikhi amaningi wokulandela isikhathi eside. Ukuze ugcine iso lenyoni libuka yonke inqubo, ukulandelela nokuhlaziya amamethrikhi kahle futhi ngokushesha kubalulekile.
IGroove ithwebula amamethrikhi wokufinyelela enhlanganweni, kuwo wonke ama-imeyili athunyelwe futhi atholiwe kuwo wonke amakholi ashayelwe abuya. Ukuthwebula le datha kuvumela iGroove ukuthi ibone ukuthi imaphi amasu okufinyelela asebenza kangcono ukufinyelela amathemba akho.
Ngokwesiko, ochwepheshe bezentengiso kuzodingeka benze isinqumo esiqondile sokuhlanganisa leyo datha futhi basebenzise isikhathi ukwenza umqondo wayo ukuthola ukuthi yimaphi amasu nezikhathi zesikhathi ezisebenza kahle kakhulu. Imininingwane engakuletha ibalulekile, kepha isikhathi sokutshala imali asikufanele. IGroove ithatha isikhathi sokuchitha embuzweni bese ivumela okhokhelayo ukuthi bakhanye ngecebo eliphakeme ngenkathi liphatha ukuhlaziywa kwegranular.
Ukugeleza: Shayela inqubo engaguquguquki
Ukubeka phambili phambili kubalulekile uma kukhulunywa nge-ABS ngenxa yevolumu ephezulu yesikhathi nezinsizakusebenza eziyidingayo. Ochwepheshe bezentengiso kumele bakwazi ukukhetha ukuthi yimiphi imikhankaso nezinhlangano abafuna ukuzibeka phambili ekusebenzeni kwabo, kepha ngezinhlangano eziningi ezibhekiswe ngasikhathi sinye, kulula ukukhungathekiswa yizo zonke izikhathi ezibekiwe.
IGroove ilwa nomzabalazo ngamandla ayo wokuhambisa izinqubo eziphindaphindwayo. Izici zayo zikuvumela ukuthi wakhe imithetho yesikhumbuzi ezenzakalelayo yokwenza uxhumane namathemba akho. Isibonelo, ungatshela isistimu ukuthi, "Kuwo wonke ama-akhawunti asuselwa ku-akhawunti, ngikhumbuze ukuthi ngifinyelele ezinsukwini ezinhlanu ngemuva kokungena ohlelweni, bese uwafaka ku-LinkedIn ezinsukwini ezinhlanu emva kwalokho," uze uthole lonke uhlaka isoftware. Esikhundleni sokuthatha isikhathi ukugcwalisa izikhumbuzo zakho ze-iPhone noma i-Google Khalenda yakho, iGroove ikusebenzisela imithetho yokuhola ngakunye okusha.
Uhlelo: Finyelela ekukhiqizeni okumsulwa
Abantu abaningi ababandakanyeka ekuthengiseni, kufanele ubakholwe izingqondo eziningi. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukuthi ube nesikhathi sobuso nomuntu ngamunye othintekayo ukuze ukwazi ukwenza umyalezo wakho uhambisane nentshisekelo yomuntu ngamunye. Ngaphandle kwethuluzi elihle lokuhlela, leso yisikhathi esiningi ne-imeyili edingekayo.
Izici zokukhiqiza zikaGroove zibhekana ngqo nephuzu lobuhlungu bokuhlela. Amaklayenti ayakwazi ukubona ikhalenda lakho nokutholakala kokubhuka isikhathi ngqo. Lokhu kusika i-imeyili emuva naphambili ukuze kuxoxwe ngezinketho zesikhathi, ikakhulukazi uma ukhombe abantu abaningi enhlanganweni eyodwa ababambe iqhaza ekuthengisweni.
Amakhono wokuhlela weGroove avumela futhi ama-reps ukuhlela ama-imeyili ukuthi athunyelwe ezikhathini ezifanele kakhulu futhi abone ukuthi ama-imeyili avulelwa nini umqondo wokuzibandakanya. Amasu angabe esesuswa ngokwazi ngokuya ngokuthi yini okusebenzayo nokuthi yini okungasebenzi, okuvumela abakwa-reps ukuthi bathole ibhalansi ephelele bese behamba ngomsebenzi wabo ngokushesha okukhulu, bavale ukuthengisa okuningi futhi bathole imali eningi.
Ihluke kanjani iGroove?
IGroove ukuphela kwesixazululo sokunika amandla ukuthengisa okukodwa emakethe okwenziwa ngendlela oyifisayo neqembu lakho lonke lokuthengisa. Ngenkathi izixazululo eziningi zisebenza ezingeni elilodwa kuphela leqembu lakho, abathuthukisi beGroove endimeni yanoma ngubani - ukusika isidingo sokuchitha kumathuluzi amaningi ahlukahlukene nakubasebenzi abagibelayo baye kwabasha lapho benyuswa.
Ukugibela inhlangano yakho eGroove inqubo elula engeke ithathe ngaphezu kwamahora ambalwa. Ngeseshini yoqeqesho olujulile, ithimba lethu lingakukhombisa ukuthi ungenza kanjani uhlelo lube ngokwezifiso zakho. Akunandaba ukuthi ngabe iqembu lakho lakhiwe ngabachwepheshe bezentengiso abali-10 noma abayi-1,000 XNUMX, ukukhuphuka phezulu kuyinto enhle.
Njengoba abantu abaningi bengenela ekuthathweni kwezinqumo ze-SaaS, inqubo yokuthengisa idinga ukwenziwa lula ngenxa yomthengisi nomthengi. IGroove inezinto zayo ezibheke ezweni lokuthengisa elisuselwa kuma-akhawunti elihlakaniphile futhi ifuna ukulenza lifezeke.
Tags: I-absukuthengisa okusekelwe ku-akhawuntiinkathoUkunika Amandla Ukuthengisauhambo lokuthengisaipayipi lokuthengisasalesforce
UChris Rothstein uyi-CEO futhi ungumsunguli we- Groove.co, ipulatifomu yokubandakanya abathengisi. Ngaphambi kweGroove.co, uChris wakha, wakala futhi waphatha amaqembu okuthengisa amabhizinisi kwaGoogle. Manje usiza ukuletha ubuchwepheshe besimanje emhlabeni wezentengiso ukuze wonke umuntu kusuka kuma-ops wokuthengisa aye kubaqondisi bezentengiso angachitha isikhathi esiningi enikeza inani kumakhasimende abo nasezinkampanini zabo.
I-2018 RSW / US Marketer-Agency Umbono Wonyaka Omusha